म गाएरै रमाउँछु
बेलायतमा संगीत अध्ययन गरेका बीसी राई आसफोर्ड केन्टमा बसोबास गर्छन् । बाबा देवी राई र आमा दयादेवी राईको कान्छा छोराका रुपमा जन्मिएका बीसीलाई सांगीतिक आकाशका आशालाग्दो गायक तथा संगीतकारका रुपमा लिइन्छ । ड्राईभिङ्ग इन्स्ट्रक्चरबाट बचेको समय संगीत क्षेत्रमा लगाउँदै आएका बीसी राईसँग जानु काम्बाङ लिङ्गदेनले एभरेस्ट टाइम्स साप्ताहिकका लागि गरेको रमाइलो कुरोकानी ।
तपाईं अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले म प्रोफेसनल्ली त ड्राईभिङ्ग इन्स्ट्रक्चर गर्छु । यसको अलावा म म्युजिक मेकिङ्ग, सिङ्गिङ अनि डी.जेको पनि पार्टटाईम काम गरिरहेको छु ।
संगीत क्षेत्रमा कसरी लाग्नु भो ?
म संगीतमा लागेको त एक बिसा भयो । रहरले नै लागियो । त्यसपछि झन् धेरै म्युजिकको सपना देख्न थालियो । अहिले त झन् आवश्यकता र व्यवसाय जस्तो पो भयो ।
बेलायतको व्यस्ततामा गीत, संगीतको कामलाई कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ ?
गाह्रो त अति नै छ । कामको व्यस्तता मात्रै नभएर छिमेकी हो डर पनि । संगीत सिक्नको महँगीलाई हेर्ने हो भने त झन् गाह्रो । तर आफूलाई काम पनि, रहर पूरा गर्न पनि दुई कुरालाई सँगै लान दिनरात कसरत गरिरहेको छु । यानिकी दिनमा काम, साँझमा संगीत यस्तै छ ।
तपाईंको भर्खरै स्रोता दर्शकमाझ आएको नयाँ एल्बमबारे बताइदिनोस् न ?
मेरो न्यू एल्बममा दसवटा गीत छन् । त्यसमध्ये एउटा हिन्दी गीत पनि छ । शब्द रनिया राई पाकिस्तानबाट हुनुहुन्छ । अरु शब्दहरु, बगिनी भएर कवि नवराज वर्तमान, हर खुसी कवि शिव कोयु, भोजपुर बजारचाँहि रिमिक्स हो । तिम्रो साथबिनाको शब्दचाहिँ यही बेलायतको आसफोर्ड निवासी गीतकार स्वप्निल लिम्बू हुनुहुन्छ । यो गीतको फिमेल स्वर विष्णु चेम्जोङको रहेको छ ।
संगीत अध्ययनबाहेक अन्य के काम गर्नुहुन्छ ?
अहिले ड्राईभिङ प्रशिक्षक छु । संगीत त पार्टटाईम मात्रै हो । संगीत अध्ययन त १० वर्षअघि २००७ मै म्युजिक डिग्री सकेको हुँ । हाम्रो नेपाली बजारमा गीत, संगीतले बाँच्न सक्ने आधार, कि त नेपाल नै गएर त्यसैलाई पेसा बनाएर बस्नु प¥यो । यहाँ (बेलायत)त सम्भव छैन काम नगरी ।
आफ्नो भाषा लिपि र कला संस्कृतिलाई जोगाउने हेतुले खोलिएका यी विभिन्न संघ संस्थाहरुले साँच्चिनै कला र संस्कृतिलाई जोगाए जस्तो लाग्छ ?
म त एकदमै कल्चरल छु । मलाई त मेरो भाषा एकदमै मन पर्छ तर बोल्नचाहिँ ६०, ७० प्रतिशतमात्रै आउँछ होला (हाहाहा...हाँस्दै) । संस्कृतिलाई जोगाउने कुरा गर्नुभयो, अब यो त हामीले नगरे कसले जोगाउने..? जति पितापुर्खाले यहाँसम्म गरिल्याए, बाटो देखाए त्यही बाटो हिँड्ने त हो । उहाँहरुको कपि गर्दै हाम्रो पहिचान जोगाउने त हो । र, विदेशमा विशेष गरेर बेलायतमा संघ संस्थाहरु हेर्दा सबैले आआफ्नो ठाउँबाट पहल त गरेकै जस्तो लाग्छ । उहाँहरु सक्क्षम पनि हुनुहुन्छ । तर, आउने पुस्ताले पो खासै चासो दिएको देखिँदैन । त्यसैले यो पहलमा आशा र निरासा दुवै छ । अब हेरौं समयले कता लैजान्छ ।
बेलायतमा संगीत पढ्न कति खर्च लाग्छ र कतिको उपलब्धिमूलक हुन्छ ?
यहाँ संगीत पढ्न खर्च त खासै धेरै हुने होइन । तर, हामीजस्ता नहुनेको लागि त एकदम धेरै नै हो । मैले गरेको बेला पनि वार्षिक ७२०० (बहत्तरसय) पाउन्ड तिर्नु पथ्र्यो । पछि त्यही कोर्सलाई लगभग ९००० (नौ हजार) तिर्नु पर्ने बनायो । अब एउटा डिग्रीलाई सोच्नुस्, पहिले मेरो पालामा २१६०० (एकाईस हजार छ सय) पाउन्ड लाग्थ्यो । अहिले त्यही डिग्री पढ्न २७००० (सताईस हजार) लाग्छ । उपलब्धिको कुरो त आफैमा भर पर्ने कुरो हो ।
संगीत क्षेत्रलाई राम्रो बनाउन के के सुधार गर्नुपर्ला ?
संगीत क्षेत्रको एरिया राम्रै छ, अझ राम्रो बनाउनको लागि त निरन्तरता नै हो हामीबाट । तर, हाम्रो देशको संगीत बजारमा भने निजी कम्पनी होस् या सरकारबाट होस् अलि राम्रो व्यवस्थापन चाँहि हुनुपर्छ । दुःख गर्ने गीतकारहरुलाई कपिराईटको व्यवस्था हुनुप¥यो, पर्फमरको राई, अनि गीतहरुको कपिराईट आआफ्नो ठाउँबाट हुनुपर्‍यो ।
कुनै एउटा गीत त्यो तपाईको हो भन्ने भइसकेपछि अरुले त्यसको कपिराईट तपाईको बिनाप्रमिसन लिन सक्दैनन् । मिडियाहरुले पनि एकपल्ट बजाइसकेपछि वार्षिक पेमेन्ट गर्नु पर्ने हो । यस्ता नियम र सिस्टम बसाउने नियम सरकारबाट पहल हुनु प¥यो । सबै इमान्दार बन्नु पर्छ संगीत क्षेत्रलाई राम्रो बनाउन ।
बेलायतमै पहिलो पल्ट गीति एल्बम निकाल्न सफल गायक तपाई, नेपालको बिनासहयोग कुनै काम गर्दा खर्चको हिसाबमा नेपाल र यहाँमा के कस्तो फरक पर्‍यो ?
९० प्रतिशत काम युकेमै भएको हो । जब जब मलाई नेपाली इन्स्टुमेन्ट (जस्तै मादल, बाँसुरी अनि सारंगी बाजा) रेकर्ड गर्न चाहिँ नेपाल नै पठाउनु पर्‍यो । खर्चको कुरामा यहाँ हामी युकेमा लो बजेटमै काम गर्दा पनि नेपालको दाँजोमा यहाँ महँगो नै पर्दछ, नेपालमा ५० र ६० ठाउँ एउटा गीतलाई लाग्छ, भने यहाँ यति पैसा त मिक्सिङ्गमै जान्छ । त्यसैले यहाँ मैले आफ्नो काम आफंैले गर्दा पनि महँगो नै प¥यो ।
संगीत सिक्न बेलायत आउनेहरुलाई सिनियरको रुपमा रहेर के कस्ता सुझाव गर्नु हुन्छ ?
मलाई त्यति थाहा छैन । म सिनियर हो कि होइन तर जे भएपनि मेरो सुझाव सकारात्मक नै हुन्छ । म यही भन्न चाहन्छु कि सजिलो गरी सरभाईब हुने सपनाचाँहि नदेख्दा राम्रो । संगीतमा स्टाबलिस्ट हुनलाई धेरै डटेर लाग्नु पर्छ । जहिले सोच्नु गन्तव्य टाढा छ तर असम्भव भने केही छैन । बस ! निरन्तर रहनु प¥यो, यहाँ मेसिभ सक्सेस हुनलाई त भाग्यले पनि साथ दिनुपर्छ । धेरै मिहेनत गर्नु पर्छ, पढ्नु पर्छ ।
तपाई संगीत कम्पोज पनि गर्नु हुन्छ ?
म संगीत कम्पोज पनि गर्छु, कम्पोज मलाई एकदम मन पर्ने पार्ट हो । मेरो आफ्नै संगीत, स्वरमा अब चाँडै एउटा एल्बम ल्याउने जमर्को गर्दै छु ।
संगीत, एरेन्ज र गायन कुनमा बढी रमाउनु हुन्छ ?
सबै क्षेत्रमा बराबरी रमाउँछु त नभनौ होला । तर, अलि धेरै चाहिँ गायनमै रमाउँछु, । यदि दुई जना सुनिदिने अडियन्स पाएँ भनें म गाएरै रमाउँछु ।
कस्ता खाले गीतहरु बढी सुन्नु हुन्छ ?
म प्रायःसबै खालका गीत सुन्छु । तर, संगीतको रुची पनि समयसँगै बदलिरहने चिज रहेछ । पहिले धेरै वेस्टर्न म्युजिक सुन्थें, अहिले आएर क्लासिकल, ब्लुस अनि हाम्रै नेपाली फोल्क म्युजिक सुन्छु ।
लामो समय बेलायत बसेर संगीत सिक्नु भो, यसलाई आफ्नै देशमा लगेर लगानी गर्ने विचार छ कि ?
ओहो ! यो त मैले पहिलेदेखि सोचेको प्लान हो तर भारी पुग्या छैन । सिकेर कहिले नसकिने रहेछ तर कुनै न कुनै दिन त म मेरो जन्मथलो नेपाल नै जान्छु । अनि यो विषयमा सोच्दा स्वर सम्राज्ञी स्वर्गीय तारा देवीको यो गीत याद आउँछ... सोचे जस्तो हुन् जीवन....।
अन्त्यमा, मैले सोध्न भुलेको र तपाईलाई भन्नु पर्छ जस्तो लागेको केही छ ?
अब तपाईं आफैं राम्रा कवयित्री, गीतकार अनि कथाकार भइकन पनि अरुको लागि अन्तर्वार्ता गरेर दुःख सुखका कथाव्यथा र मनका कुरा पोख्ने मौका दिनुहुन्छ, अति खुसी लाग्छ । बेलायतबाट प्रकाशित एकमात्र चर्चित साप्ताहिक पत्रिका एभरेष्ट टाइम्सले नेपालीहरुमाझ राम्रो पाइला चालिरहेको छ । एभरेष्ट टाइम्सले यही अंकबाट दस वर्ष प्रवेश गरेको सुनेको छु, पत्रिकाले आफ्नो यात्रा यसरी नै निरन्तर गरिरहन सकोस् शुभकाममा ।